XL + | I-FXCC
Yenza okulungileyo MANJE
Fumana iFowuni yeLightForum yasimahla Kwaye Buyisa iMbuyekezo Ukuya kuthi ga kwi-24%
Thatha ithuba lokukhuthaza ukuqhubela phambili nge-10th Annivoc Promot, Yenza i I-Akhawunti ye-XL kwaye wenze ingeniso eyongezelelweyo ngelixa uhlala ukhuselekile ekhaya!
Ungafumana imali yoku Iipesenti ezingama-24 yembuyekezo kwi-equity yakho ukongeza kwi yonke inzuzo wenza kowakho imisebenzi yorhwebo.
Kwaye ukugcina uhlala uqhagamshele, sinikezela fREE mobile mobile kubathengi bethu ngokukhawuleza emva kokusebenzisa i-akhawunti yabo ye-XL. Nokuba uthanda iapile or Samsung, unokukhetha isixhobo esikhethileyo!
Musa ukulinda omnye umzuzu! Qala ukurhola imbuyekezo engakumbi namhlanje!
VULELA iXL yam + iAccount YOKU
Umthengi okhoyo? Ngena apha
I-Akhawunti ye-XL + iyafumaneka kwiidiphozithi ngedola yaseMelika eyenziwe ngocingo lwebhanki. Funda imiqathango epheleleyo
Ilawulwa kwaye ilayisenisi
yethu umthunywa wokuqala uye wahlala eqinileyo; ukubonelela ngeenkonzo ezingabonakaliyo zabathengi, ezixhaswe ngu: elula, ecacileyo, esicacileyo kunye nesiphakamiso sezobugcisa, okwenza ukuba abathengi bethu babe nesiseko esingcono kakhulu, esingaba ngabahwebi abaphumelelayo. Fumana umehluko weFXCC, vula i-akhawunti ngoku
Vula i-akhawunti yam ye-xl +
Ukudibene nomgangatho oqhelekileyo, iinkqubo zemveli zenkxaso-mali; ngokudluliselwa kwebhanki, amakhadi okubambisa kunye namatyala, i-FXCC inika neenkcukacha ezingenakulungelelweyo zokukhetha kwiinkonzo ezikhuselekileyo zehlabathi, ezifana ne: China Union Pay, i-Netbanx Asia, i-Skrill, iNeteller ne-Boleto, ukubiza ngambalwa. Zonke iindlela zokudlulisa zinamazinga aphakamileyo okhuseleko lomgaqo-nkqubo ofakwe ngaphakathi, ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko lwakho kwaye lukhuselwe ngokuyimfihlo.